Ihe ntinye 11 kacha mma na ngwa nchekwa maka Linux | Site na Linux
Top 11 Hacking na Security Apps maka Linux
Linux bụ hacker sistemụ par kacha mma. Nke a abụghị n'ihi na ọ "gbagwojuru anya" iji ya mana ọ bụ maka nnukwu ihe egwu na ngwa nchekwa emere maka sistemu a. Na post a, anyị depụtara naanị ụfọdụ ndị dị mkpa.
1. John the Ripper: paswọọdụ cracking ngwá ọrụ. Ọ bụ otu n'ime ndị a kacha mara amara na ndị kachasị ewu ewu (ọ nwekwara ụdị Windows). Ke adianade autodetecting hashing nke okwuntughe, ị nwere ike hazi ya otú ị chọrọ. You nwere ike iji ya na okwuntughe ezoro ezo maka Unix (DES, MD5 ma ọ bụ Blowfish), Kerberos AFS na Windows. Ọ nwere mgbakwunye modulu iji tinye paswọọdụ hashes ezoro ezo na MD4 ma chekwaa ya LDAP, MySQL na ndị ọzọ.
2. Ndokwa: Onye na-amaghị Nmap? Obi abụọ adịghị ya na usoro kachasị mma maka nchekwa netwọk. Nwere ike iji ya chọta kọmputa na ọrụ na netwọkụ. A na-ejikarị ya eme nchọpụta maka ọdụ ụgbọ mmiri, mana nke a bụ naanị otu n'ime ohere ya. O nwekwara ike ịchọpụta ọrụ nnabata na netwọkụ yana ịnye nkọwa nke kọmpụta a chọpụtara (sistemụ arụmọrụ, oge ejikọtara ya, sọftụwia ejiri rụọ ọrụ, ọnụnọ nke firewall ma ọ bụ ọbụlagodi akara nke kaadị ntanetị dịpụrụ adịpụ). Ọ na-arụ ọrụ na Windows na Mac OS X kwa.
3. Nessus: ngwá ọrụ iji chọta ma nyochaa ngwanrọ ngwanrọ, dịka ndị enwere ike iji jikwaa ma ọ bụ nweta data na kọmputa dịpụrụ adịpụ. Ọ na-achọta okwuntughe ndabara, patch etinyeghị, wdg.
4. chkrootkit: ihu ọma ọ bụ shei akwukwọ na-ekwe ka chọpụtara rootkits arụnyere na anyị usoro. Nsogbu bụ na ọtụtụ rootkits dị ugbu a na-achọpụta ọnụnọ nke mmemme dị ka nke a ka a ghara ịchọpụta ya.
5. Wireshark: Packet sniffer, ejiri nyocha netwok network. O di ka tcpdump (anyi ga ekwu maka ya ma emechaa) mana ya na GUI na uzo ozo na nza. Tinye kaadị n'ime ọnọdụ ịkwa iko inwe ike inyocha okporo ụzọ netwọkụ niile. Ọ bụkwa maka Windows.
6. netcat: ngwá ọrụ na-enye ohere ịmepe ọdụ ụgbọ mmiri TCP / UDP na kọmpụta dịpụrụ adịpụ (emesia ọ na-ege ntị), ijikọta shei na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na ịmanye njikọ UDP / TCP (ọ bara uru maka nyocha ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ na-ebufe bit-bit n'etiti kọmputa abụọ).
7. Kismet: nchọpụta netwọk, ngwugwu sniffer na usoro intrusion maka netwọọkụ ikuku 802.11.
8. ịpị: generator na nyocha maka usoro TCP / IP. Na nsụgharị ndị kachasị ọhụrụ, enwere ike iji edemede ederede dabere na asụsụ Tcl ma ọ na-etinyekwa eriri igwe (ederede ederede) iji kọwaa ngwugwu TCP / IP, n'ụzọ dị otú a ọ dị mfe ịghọta ha yana inwe ike ịchịkwa ha n'ụzọ dị mfe .
9. Na-achọ: Ọ bụ NIPS: Sistem Mgbochi Ọrịa na NIDS: Nchọpụta Ntanetị Ntanetị, nke nwere ike nyochaa netwọk IP. A na-ejikarị ya eme ihe iji chọpụta mwakpo dịka nkwụsị mmiri, ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri mepere emepe, mwakpo weebụ, wdg.
10. cma: debugging ngwá ọrụ na-agba ọsọ si iwu akara. Ọ na - enyere gị aka ịhụ ngwugwu TCP / IP (na ndị ọzọ) a na - ebufe ma ọ bụ nata na kọmputa.
11. Metasploit: ngwá ọrụ a nke na-enye anyị ozi gbasara adịghị ike nche ma na-enye anyị ohere ịme nyocha ịbanye na sistemụ ndị dịpụrụ adịpụ. O nwekwara a kpuchie iji rụọ ọrụ nke gị ma maka Linux na Windows. Enwere otutu nkuzi na net ebe ha na akowa otu esi eji ya.
Isi: Ozi na-eso
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Top 11 Hacking na Security Apps maka Linux
Ihe 12 kwuru, hapụ nke gị
Fernando Munbach dijo
"Nmap nkuzi" na-enweghị njikọ ọ bụla…. Detuo dị ọcha & Tapawa?
Zaghachi Fernando Mumbach
Ezigbo post, chkrootkit na Metasploit amaghi ha. Ọzọkwa, i nwere ike ịkọrọ anyị ihe ọ bụla nche log ị maara (Spanish, ọkacha mma).
Saito Mordraw dijo
N'ezie magburu onwe ntinye, ọkacha mmasị.
Zaghachi Saito Mordraug
Lee. Ndị kasị mma nche na saịtị (izugbe… abụghị maka "hackers") na m maara bụ Segu-info.com.ar.
ezigbo pag abụghị ihe ọmụma !! Magburu onwe ..
Magburu onwe !!!!… daalụ nke ukwuu! .. ọ bụ ya mere m ji nwee mmasị m .. «usemoslinux»… ha na-enyere m aka mgbe niile…. Daalụ nke ukwuu!… ..
Ekele si BC Mexic…
Keylogger ahụ bakwara uru mana nke ahụ bụ maka sistemụ Windows mana agbanyeghị na ekwenyeghị m na ọtụtụ ihe diski ahụ na-eme naanị mmadụ ole na ole (Ọkachamara) na-eme ụdị ihe ndị a:
Nwere ike ịlele ebe a post m chọtara n'oge na-adịbeghị anya.
I wanna ịbụ hackin
Zaghachi ka yassit
Anyị na-achọ ndị kasị mma hackers si gburugburu ụwa, dị nnọọ njọ ma nwee ike, dee ihe. ronaldcluwts@yahoo.com
Zaghachi ka ronald
Ezigbo ozi! Otu echiche, maka ndị na-achọ ịmata ndị na-amalite ... Gbalịa iji ihe njikwa ahụ, na mbụ ọ nwere ike ịdị ntakịrị, mana ... ka oge na-aga, ha jidere aka gị, detụ ire! Gịnị kpatara m ji kwuo nke a? Dị mfe, Linux abụghị maka eserese eserese (nke ejiri ya ugbu a bụ ihe ọzọ), yana eserese eserese na-eme ka o sie ike ịgbanwe iwu mgbe ụfọdụ, site na ọnụahịa ị nwere ike igwu nwayọ. Ekelere m obodo Linux niile site na Argentina, yana EH niile nke obodo 🙂
amaghị aha dijo
Gịnị kpatara tcpdump ọ bụrụ na Wireshark?
Zaghachi Onye ọrụ
Skype 2.2 beta dị!
Gnome 3 adịlarị n'etiti anyị!